I-Phosphatidylserine powder ehamba phambili (51446-62-9) Umkhiqizi nefektri
ICofttek ingumkhiqizi we-Phosphatidylserine powder omuhle kakhulu eChina. Ifektri yethu inohlelo oluphelele lokuphathwa kokukhiqiza (i-ISO9001 & ISO14001), enomthamo wokukhiqiza wanyanga zonke we-1200kg.
I-Phosphatidylserine (PS) powder (51446-62-9) ividiyo
I-Phosphatidylserine (PS) powder (51446-62-9) Siziqu
Ukuhlanzeka 20% 、 50% 、 70%
Ifomula Yamamolekhula: C13H24NO10P
Isisindo Yamamolekhula: I-792.089 g / mol
Igama lamakhemikhali: (2S) -2-Amino-3 - (((R) -2,3-bis (stearoyloxy) propoxy) (hydroxy) phosphoryl) oxy) propanoic acid
Ukuphila okungaphelele: 0.85 no-40 min
Umswakama: I-soluble eChloroform, Toluene; engangeni ku-Ethanol, Methanol, Amanzi
Isimo Sokugcina: Gcina endaweni yokushisa yegumbi eyomile nehlanzekile, esitsheni se-airtight esivaliwe, gcina umoya ungaphandle, uvikelekile ekushiseni, ukukhanya nasekunomswakama.
Isicelo: I-Phosphatidylserine (PS) powder isiza ukugcina amazinga e-cortisol enempilo futhi inenzuzo yememori nokuhlushwa.
ukubukeka: Ukukhanya ku-brownish yellow powder
I-Phosphatidylserine (PS) (51446-62-9) I-NMR Spectrum
Yini i-Phosphatidylserine (PS) powder (51446-62-9)?
I-phosphatidylserine yinto enamafutha ebizwa nge-phospholipid. Kumboza futhi ivikele amaseli engqondweni yakho futhi iphathe imiyalezo phakathi kwawo. I-Phosphatidylserine idlala indima ebalulekile ekugcineni izingqondo nememori yakho iqonde. Izifundo zezilwane ziphakamisa ukuthi izinga lale nto esebuchosheni liyancipha ngeminyaka.
Phosphatidylserine (51446-62-9) izinzuzo
I-Phosphatidylserine (PS) powder iyinto ebalulekile yazo zonke izinhlaka ze-neuronal. Ucwaningo lwabantu lukhombisa ukuthi i-PS ingasiza ukusekela impilo yonke yobuchopho. I-Phosphatidylserine (PS) powder isiza ukugcina amazinga e-cortisol enempilo futhi inenzuzo yememori nokuhlushwa. I-Phosphatidylserine Powder uhlelo oluhle kakhulu lokulethwa kwezingane nasebekhulile abangaba nobunzima ekugwinyeni ama-capsule.I-powder ye -PS ayinancasa futhi izoncibilika ibe yi-appleauce noma yikuphi ukudla.
I-Phosphatidylserine (51446-62-9) I-Mechanism Of Action?
I-Phosphatidylserine powder, eyaziwa nangokuthi i-PS, iyisakhi se-phospholipid esitholakala enhlanzini, imifino enamaqabunga aluhlaza, soya kanye nelayisi, futhi kubalulekile ekusebenzeni okujwayelekile kwezitho zamangqamuzana ezinzwa futhi kusebenze iProtein kinase C (PKC) okukhonjiswe ukuthi iyabandakanyeka ekusebenzeni kwememori. Kwi-apoptosis, i-phosphatidyl serine idluliselwa ephepheni elingaphandle le-plasma membrane. Lokhu kuyingxenye yenqubo lapho iseli libhekiswe kwi-phagocytosis. I-Phosphatidylserine (PS) ikhonjiswe ukwehla okungatheni kokuqonda kwezinhlobo zezilwane. I-PS iphenywe ngenani elincane lokuhlolwa kwe-placebo okungaboni kabili futhi kukhonjisiwe ukukhulisa ukusebenza kwememori kubantu asebekhulile. Ngenxa yezinzuzo zokubamba kwengqondo ze-potentail ze-phosphatidylserine, into iyathengiswa njengesengezo sokudla kubantu abakholelwa ukuthi bangazuza ekudla okwandayo.
I-Phosphatidylserine (PS) iyisengezo sokudla esithole intshisakalo ethile njengendlela yokwelashwa okungenzeka yesifo i-Alzheimer's nezinye izinkinga zememori. Ucwaningo oluningi nge-phosphatidylserine lukhombisa amakhono nokuziphatha okuthuthukile. Kodwa-ke, ukuthuthuka kuthathe izinyanga ezimbalwa kuphela futhi kwabonwa kubantu abanezimpawu ezibucayi kakhulu.
I-Phosphatidylserine (PS) powder ukudayiswa(Ungayithenga kuphi i-Phosphatidylserine powder ngobuningi)
Singumhlinzeki we-Phosphatidylserine powder onguchwepheshe weminyaka eminingana, sinikezela ngemikhiqizo ngentengo yokuncintisana, futhi umkhiqizo wethu ungowekhwalithi ephezulu kakhulu futhi uhlolwa ngokuqinile, ngokuzimela ukuqinisekisa ukuthi kuphephile ukusetshenziswa emhlabeni wonke.
UChristie WW (4 Ephreli 2013). "I-Phosphatidylserine ne-Lipids ehlobene: Ukwakheka, Ukwenzeka, I-Biochemistry kanye ne-Analysis" (PDF). I-American Oil Chemists 'Society Lipid Library. Kubuyiswe umhlaka-20 Ephreli 2017.
USmith, uGlenn (2 Juni 2014). "Ngabe i-phosphatidylserine ingayithuthukisa inkumbulo nokusebenza kwengqondo kubantu abanesifo i-Alzheimer's?". Umtholampilo waseMayo. Ibuyiswe ngomhla ka-23 Agasti 2014.
UGlade MJ, Smith K (Juni 2015). "Phosphatidylserine nobuchopho bomuntu". Ukudla okunomsoco. 31 (6): 781-6. i-doi: 10.1016 / j.nut.2014.10.014. I-PMID 25933483.